citizens bank international limited(citizens bank international limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले पे लेस एपमा आबद्ध आउटलेटहरुमा विशेष छुट पाउने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र पेलेस एपबीच सिटिजन्स बैंकको कार्डवाहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकले पेलेस एससँग आवद्ध ४५० भन्दा बढी आउटलेटमा विशेष छुट पाउनेछन्। हालसम्म सिटिजन्स बैंकको कार्ड नभएका ग्राहकलाई पनि तत्कालै नयाँ कार्ड उपलब्ध गराउन...
सिटिजन्स बैंक र कर्मभूमि समाजबीच सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेमा सम्झौता
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र कर्मभ्रमि समाजबीच सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा लघु, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ। सिटिजन्स बैंक लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि विभिन्न सुविधा र सेवा उपलब्ध गराउन सधैँ अग्रसर रहेको छ। दिगो विकासका लागि...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले त्रिपुरा रिसोर्टमा विशेष छुट पाउने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकले कालिञ्चोकस्थित त्रिपुरा रिसोर्टमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। यस विषयमा सिटिजन्स बैंक र त्रिपुरा रिसोर्टबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार अब सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले त्रिपुरा रिसोर्टमा विभिन्न सेवा लिएबापत शुल्कमा विशेष छुट पाउनेछन्। यो सम्झौतापश्चात सिटिजन्स बैंकका...
डबल डिजिटको रिटर्न र ३ वर्षभित्र ‘टप टेन बैंक’ बन्ने सिटिजन्सको घोषणा
काठमाण्डौ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको बेलामा समेत सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले सेयरधनीका लागि डबल डिजिट(दोहोरो अंक)को रिटर्न दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । योसँगै बैंकले आगामी ३ वर्षभित्र देशकै टप टेन(उत्कृष्ट १०) बैंकको सूचीमा आफूलाई उभ्याउने महत्वकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । सिटिजन्स बैंक...
काठमाण्डौ। तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको छैटौँ विशेष साधारणसभा आज बिहीबार सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित नारायणहिटीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित विशेष साधारणसभाल तिनाउ मिसनलाई प्राप्ति गर्ने विशेष...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड बीच कर्पोरेट पे प्रणालीको कार्यान्वयनका लागी सम्झौता भएको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत बैंकका संस्थागत ग्राहकहरुले बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नु हुनेछ। बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकलाई प्रदान गर्ने उक्त डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत बैंकमा नगई आफैँले...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई वन डे थ्रीडी आर्ट रेस्टुरेन्टमा विशेष छुट
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले काठमाण्डाको कुमारीपाटीमा रहेको वन डे थ्रीडी आर्ट रेस्टुरेन्टमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। बैंक र उक्त रेस्टुरेन्टबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई रेष्टुरेन्टको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। उक्त सम्झौतापश्चात सिटिजन्स...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा २७.२६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको...
सिटिजन्स बैंकको ‘इन्स्ट बाई’ योजना : मासिक किस्ताबन्दीमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्न सकिने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहकलाई वस्तु एवं सेवा खरिद गर्न सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ देशभरका जुनसुकै मर्चेन्टहरूमा क्रेडिट कार्डमार्फत न्यूनतम रु. १० हजारदेखि अधिकतम रु. २ लाख ५० हजारसम्म भुक्तानी गर्दा उक्त खरिद रकमलाई मासिक किस्ताबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सकिने ‘इन्स्ट बाई’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले जाजरकोटाको नलगाड नगरपालिकास्थित कालीमाटी बजारमा १०७ ओैँ शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ । गत शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त शाखारहित बैंकिङका लागि स्थानीय व्यवसायी अमरबहादुर बोहरालाई व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ। देशका विभिन्न दुर्गमस्थलका...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई होटेल अकामामा विशेष छुट
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकले काठमाण्डौको धुम्बाराहीस्थित होटेल अकामा प्रालिमा विशेष छुटा पाउने भएका छन्। यस सम्बन्धमा सिटिजन्स बैंक र होटेल अकामाबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतापश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट/क्रेडिट/प्रिभिलेज कार्डवाहक तथा कर्मचारीहरु साथसाथै सञ्चालक समितिका सदस्यले होटल अकामाका विभिन्न...
काठमाण्डौ । तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति प्रक्रिया मूर्त रुप दिन सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो छैटौँ विशेष साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा आउँदो माघ १५ गते बिहीबार डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी पथमा अवस्थित आफ्नो प्रधान कार्यालयमा...
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसेनल लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त, बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने गरी आज उक्त बैंकसँग अन्तिम सम�...
सिटिजन्स बैंकको सन्देशमूलक भिडियो भाइरल, के छ खास ?
काठमाण्डौ । आफ्ना बालबच्चामा भएको क्षमता अभिभावकले नबुझ्ने समस्या नेपालीहरुको घर–घरको समस्या हो । एकातिर अभिभावकले आफूभित्रको क्षमता नबुझ्दा कतिपय क्षमतावान सन्तानहरु कला भएर पनि चूपचाप बस्न बाध्य छन् भने ढिलै भए पनि सन्तानको क्षमता बुझ्ने अभिभावकका अगाडि त्यसलाई फूलाउने र फलाउने विकल्पको अभाव हुन्छ । कतिपयमा क्षमता र नवीन अवधारणा...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको परियोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौतापछि रिटर्नी माइग्रेन्टको सिफारिसमा बैंकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ।...